Ikpe maka idobe ugogbe anya gị n'oge mmekọahụ - Mmekọahụ-Ịhụnanya-Ndụ
Ikpe maka idobe iko gị n'oge mmekọahụ
Achọghị m ka m tụọ ụjọ, mana achọpụtala m ihe yiri ka ọ bụ nsogbu mmekọahụ na -abịanụ. Ndị nwere anya adịghị mma -na ndị na -enwe mmasị na ndị anya adịghị mma -na -eme ihie ụzọ dị oke mkpa nke ime ụlọ. Ee e, ọ bụghị ihe ihere dị obere nke ịnwa iso onye na -eyi enyo mgbe ị nọ nakwa na -eyi iko (ọ bụ ezie na e nwere ihe na -atọ ụtọ, amaghị nke ọma na ya). Ana m ekwu maka iwepụ anya gị tupu ịme ihe ahụ. Ana m agba unu ume, ndị nkuzi m yi enyo anya, ka unu tụlee na -edebe ha.
hydrafacial keravive ahịa ala isi ọgwụgwọ m nso
Cheedị, ọ bụrụ na ị ga -achọ, akụkọ ifo Tinder: I kwekọrọ na Clark Kent nke nrọ gị, yana n'okpuru okpokolo agba ojii ndị ahụ ị dị. mara enwere Superman (ma ọ bụ ihe ọ bụla na-abụghị heteronormative atụ kacha mma na-arụ ọrụ ebe a) nke ịchọrọ ịhụ gba ọtọ. Ị na -aga ụbọchị ole na ole (ma ọ bụ naanị otu, ihe ọ bụla na -eme gị ahụ nke ọma) wee kpebie na ọ bụ oge itinye aka. Mgbe ọkụ gbadara ala wee yipụ onye gị na ya ga -eyiri uwe, ha na -ewepụ iko ha na -ekpughe…
Eleghi anya ọ bụ otu ha siri mee ka anya m dị nro na -atọ ụtọ mgbe ha si n'imi ha wezuga mere ka ị daa n'ikpere. Eleghi anya ị ga-enwerịrị nwa ebu n'afọ na-esote ndụ-nke bụ ihe ezi uche dị na ya n'ihi na iko dị oke mma. Ihe ọ sọrọ ya bụrụ, ị nwere nnukwu oge mana enweghị ike inye aka mana chee na ọ nwere ihe adịghị mma. Ma nke ahụ bụ n'ihi na ọ nọ ebe ahụ bụ, enyi m — e nwere n'ezie. Ha kwesịrị ịdị na -eme ha.
Ma ọ bụrụ na ị tụlee onye gị na ya na-eyiri enyo na-adịchaghị n'otu ọnọdụ mana tụgharịa, ị ga-amata na ha hụrụ gị n'anya dịka gị, Anọ Anọ!
Anọ m na -eyi iko kemgbe m dị ọnwa 16. N'oge a, ha bụ mgbatị ihu m, akụkụ nke ihe owuwu dị ka dimples ma ọ bụ ntụpọ. Iwepu ha na -emepụta ọkwa gba ọtọ ọzọ nke na -adịghị enwe agụụ mmekọahụ -ọghọm nke jupụtara n'ofe anya.
ego ole ka ị na -enye onye na -ebuga ozi
Onye edemede, n'ebube ya niile dị ebube
Yabụ na anaghị m ewepụkarị iko m mgbe m na -enwe mmekọahụ (lee ihe edere n'elu banyere etu ihu m si dị, wdg), ma ọ bụrụ na ebe nchekwa na -arụ ọrụ, ọ dịbeghị mgbe a jụrụ m nke ọma - echere m ma ọ bụrụ na onye mmekọ ga -arịọ nke ahụ, ọ ga -abụ iji kpuchido okpokolo agba ka ọ ghara imebi (nke dị mma) ma ọ bụ n'ihi na ha nwere kink nkiri klaasị ụlọ akwụkwọ sekọndrị ebe iwepụ ha bụ ihe nkiri sexy (nke a dịkwa mma ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ akpa gị - nkwenye bụ eze). N'ihi ihe ndị a niile, ọ dịtụghị mgbe m chere na ọ dị m mkpa iwepụ ha tupu m banye ahịa.
Mana achọrọ m ịchọpụta ma ọ bụrụ na ndị ọzọ chere otu a, yabụ m mere nyocha sayensị nke m - aka. Ajụrụ m Twitter ma ọ bụrụ na ndị mmadụ wepụrụ okpokolo agba ha tupu ha abata n'etiti mpempe akwụkwọ. Ajụrụ m ajụjụ ahụ ugboro abụọ, na -agbanwe ntụgharị okwu site na, Ị na -ewepụ iko gị n'oge mmekọahụ? ka Ị na -edebe enyo anya gị mgbe ị na -enwe mmekọahụ? n'ihi na m na -echeta ihe sitere na klaasị psyche nke kọleji m gbasara inwe njikwa na ịkọwa okwu na -ese nsonaazụ gị. O yiri nnọọ ihe ziri ezi ime.
O juru m anya ịhụ na ọtụtụ Tweeters kwuru na ha anaghị eyi enyo anya- n'agbanyeghị na Council Vision of America na-atụ aro pasent 75 nke ndị okenye chọrọ ụdị mgbazi ọhụụ (agbanyeghị, ọ naghị akụda pasent ole bụ akụkụ- ndị na -ebu oge, ole n'ime ọnụ ọgụgụ ahụ anaghị agwọ ọrịa, ma ọ bụ họrọ kọntaktị, ma ọ bụ ịwa ahụ anya Lasik, na ndị ọzọ). Ọ tụrụ m n'anya ịhụ ka imirikiti ndị mmadụ kwetara ọ dịghị na-ewepụ iko ha, na ụfọdụ ndị na-eyi enyo na-enweghị iko kpughere na ndị mmekọ iko ha ga-eyipụ ha oge niile. Nke a abụghị ọgụgụ kacha zie ezi - abụghị m ọkà mmụta sayensị - mana ọ dị ka ihe na -akụda mmụọ.
esi eyi akpụkpọ ụkwụ ọgụ
Site n'iwepụ iko tupu anyị enwee mmekọahụ, anyị anya anọ nke ụwa na-echefu otu ihe dị mkpa: ewezuga ọnọdụ ahụike anụ ahụ na-enweghị ike anyị, ihe ka ọtụtụ n'ime anyị họrọ yi uwe. Anyị nwere ike nweta Lasik, anyị nwere ike jiri kọntaktị iko (plastik?) Anya anyị kwa ụbọchị (ọzọ, a raara m nye ihe nkiri), mana anyị na -ahọrọ iko.
Ihe nkiri '90s kụrụ' Ọ bụ ihe niile '' bụ ụdị ihe nkiri nwa ebu n'afọ mara mma.
Maka gịnị? N'ihi na ha mara mma ma maa mma, anyị dịkwa mma na ha. Ndị mmadụ na-ahụ anyị ka anyị nwere mmekọ nwoke na nwanyị n'ime ha, ha sokwa n'ihe kpatara na anyị mara mma nke ukwuu ma maa mma ma maa mma.
ndepụta bachelors na bachelorettes
Na ihe a na -agaghị echefu echefu n'oge nke atọ nke Ezigbo ndị nwunye Beverly Hills, Badass/onye gbara alụkwaghịm na nso nso a Brandi Glanville kwuru na ya nwere otu iko ọ na -edebe naanị maka ime ụlọ. Ọ bụ ezie na nke ahụ abụghị eziokwu kpamkpam-kemgbe ọ mere ka ọ bụrụ omume ya ịka nká na ile anya na ọ mara mma mgbe ọ na-eme ya-ọ ka bụ echiche na-akpali akpali. Ọ bụrụ na anyị niile bụ ndị na -eyi iko nwere ike ịnabata Brandi Glanvil nke dị n'ime (na mpụta) wee buru okpokolo agba anyị banye n'ime ụlọ, ikekwe anyị ga -enwe mmekọahụ ka mma n'ihi ya.
Maka uru ọ bara, iko bụ akara na -ewu ewu n'ọtụtụ saịtị porn. Ndị mmadụ nọ na okpokolo agba anyị, ọkachasị na karịsịa maka inwe mmekọahụ. Anyị kwesịkwara ime otú ahụ.
agba nkuanya maka ntutu uhie
bradley cooper na lady gaga emighị emi
etemeete maka keisi ocha ntutu anya anya
ịkwalite bra enweghị eriri